घर संयुक्त राज्य फुटबॉल स्टोरीहरू अंग्रेजी फुटबल खेलाडीहरू ज्याक ग्रेलीश बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू
LB एक फुटबल जीनियस को पूर्ण कहानी प्रस्तुत गर्दछ जो सर्वश्रेष्ठ "ज्याक“। हाम्रो ज्याक ग्रेलीश बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू तपाईंको बाल्यकालको समयदेखि आजको दिनसम्म तपाईंलाई उल्लेखनीय घटनाहरूको पूर्ण खाता प्रस्तुत गर्दछ।
ज्याक ग्रेलीश बचपन कहानी - मिति विश्लेषण। आईजी, ट्विटर, TheTimes र उपाध्यक्ष मा क्रेडिट।
विश्लेषणमा उसको सुरुको जीवन, पारिवारिक पृष्ठभूमि, प्रारम्भिक क्यारियर जीवन, प्रख्यात कथाको लागि उनको मार्ग, प्रख्यात कथामा वृद्धि, सम्बन्ध, व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन, जीवनशैली आदि शामिल छ।
हो, सबैलाई थाहा छ कि ऊ दौडन सक्ने क्षमता र भूत भूत रक्षकहरू बारे जान्छ। यद्यपि केवल थोरैले ज्याक ग्रेलीशको जीवनी विचार गर्छन् जुन धेरै रोचक छ। अब थप विज्ञापन बिना, सुरु गरौं।
ज्याक ग्रेलीश बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - प्रारम्भिक जीवन र पारिवारिक पृष्ठभूमि
शुरुवात गरेर, ज्याक पिटर ग्रेलीशको जन्म सेप्टेम्बर १ 10 1995 the को १० औं दिनमा उनकी आमा करेन ग्रीलीश र बुबा केविन ग्रेलीश युनाइटेड किंगडमको बर्मिंघम शहरमा भएको थियो। तल ज्याक ग्रेलीशका अभिभावकको एक सुन्दर फोटो छ जो their० को दशकमा हेर्छन्।
ज्याक ग्रेलीश अभिभावक- करेन र केभिन ग्रेलीश।
अ foot्ग्रेजी र आयरिश पारिवारिक जराका साथ अंग्रेजी फुटबलर उनका बुबाआमा क्यारेन र केभिनका लागि तीन बच्चाहरूको पहिलो बच्चाको रूपमा जन्मेका थिए जो भक्त क्याथोलिकहरू हुन्। ऊ खुशीको बच्चाले जन्मेको थियो जसले पहिलो जन्मेको प्रत्येक फाइदाको आनन्द उठायो।
यद्यपि बर्मिंघममा मध्यमवर्गीय परिवारमा जन्मिए पनि, ज्याक उसको बच्चा भाई केभन ग्रेलीश र दिदीहरू- क्यारा र होलीसँगै हुर्केका थिए। उनी इ England्ल्यान्डको ठूलो शहर सोलिहुलमा हुर्किए र प्रसिद्ध फोर-व्हील ड्राइभ कारको निर्माण कारखानाको घर भयो ल्याण्ड रोवर.
ज्याक ग्रेलिश जन्म स्थान। WorldAtlas मा क्रेडिट।
मध्य इंग्लैंडमा हुर्किएको ज्याकको प्रारम्भिक जीवन पारिवारिक त्रासदीको रूपमा चिनिन्थ्यो। ग्रेलीशले आफ्नो बच्चाको मृत्युको साक्षी दिए जुन किलान डेनियल ग्रेलीशको नामबाट जान्छ। उसको मृत्यु भयो जब सानो ज्याक केवल चार वर्षको थियो। साना केनेल डानियलले चित्रण गरेको अप्रिल २००० मा नौ महिनाको उमेरमा एक सीओटीको मृत्यु भयो।
ज्याक ग्रेलीश आफ्नो सानो भाई गुमाए जब उनी चार वर्षको थिए। आईजी लाई क्रेडिट
Google ले यो राख्छ, यस प्रकारको मृत्युलाई राम्रोसँग चिनिन्छ अचानक शिशु डेथसिन्ड्रोम (SIDS) भनेको निद्रामा बच्चाको अचानक मृत्युलाई वर्णन गर्न प्रयोग गरिएको शब्द हो जहाँ कुनै कारण वा कारण फेला पार्न सकिदैन।
ज्याक ग्रेलीश बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - शिक्षा र क्यारियर बिल्डअप
सोलिहुलमा बस्दा ज्याक ग्रिलिश परिवारलाई क्याथोलिक परिवारका बच्चाहरू बाहेक उनीहरूका बच्चाहरूले हाम्रो लेडी अफ कॉम्प्रेसन रोमन क्याथोलिक प्राइमरी स्कूलमा पढेका थिए। स्कूलमा छँदा ग्रेलिशले खेलकुदमा सफलता फेला पारे, यो एउटा यस्तो कार्य हो जसले फुटबललाई पछ्याउने उसको निर्णयलाई प्रेरित गर्‍यो। फुटबलको कुरा गर्दा, ज्याक ग्रेलीशको परिवारका प्रत्येक सदस्य एस्टन विला फ्यान थिए।
ज्याकसँग उनको मनपर्ने एस्टोन भिल्ला खेलाडी पॉल चार्ल्स मर्सन थिए, जो एक पूर्व फुटबलर थिए जसले आक्रमणकारी मिडफिल्डर र एस्टोन विलाका लागि प्लेमेकरको रूपमा सफलता पाए। पछि स्काइस्पोर्ट्सको साथमा एक अंग्रेजी फुटबल टेलिभिजन पंडित भए। तल उसको एस्टोन भिल्ला शर्टमा ज्याकको फोटो छ जुन उसको भान्जासँग आफ्नो फुटबल आइडल पलसँगै छ।
ज्याक ग्र्यालिश (बायाँ) एक सानो बच्चाको रूपमा, आफ्नो चचेरो भाई शिन मिल्स र पल मर्सन (केन्द्र) संग।
त्यसबेला दुबै केटाहरूले विलाको तालिम मैदान बाहिर पर्खाइ लिने बानी बसालेका थिए। उनीहरूले आफ्नो मूर्ति पॉल मार्सनलाई फोटो खिच्न थालेका थिए। उनीहरूले १ 101 1998 to देखि २००२ सम्म १०० प्रिमियर लिगमा भिलाका लागि प्रदर्शन गरेका थिए।
भिल्ला पार्क प्रशिक्षण भ्रमणबाट टाढा, जवान ज्याकले पॉल मार्सनको पदचिन्हहरूको अनुसरण गर्न फुटबल अभ्यासमा भाग लिए। साथीहरूसँग स्थानीय फुटबल खेल्दा उसलाई आफ्नो सीपहरू पूर्ण रूपमा हर्दै गरेको थिएन। आफ्नो मार्क ओभरसिपिpping तर नीलो बाहिर उनको फुटबल बलहरु को साथ काम गरीरहेको। ती आक्रमणकारी मिडफिल्डरसँग मिल्दोजुल्दो चीजहरू थिए।
ज्याक ग्रेलीश बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - प्रारम्भिक क्यारियर लाइफ
ज्याक ग्रेलीशको परिवारले अनुभव गरेको आनन्दको कुनै सीमा थिएन जब तिनीहरूले उडान र colors्गका साथ आफ्नै पारितो परीक्षणहरू देखे र आफैलाई विला एकेडेमी रोस्टरमा भर्ना गरे।
ज्याक ग्रेलीश - विला एकेडेमीको साथ प्रारम्भिक क्यारियर जीवन। आईजी लाई क्रेडिट
फुटबलको प्रारम्भिक सुरुवात जैक ग्रेलीशका आमा बुबा आफ्ना छोराको लागि चाहन्थ्यो। एस्टन भिल्ला एकेडेमीको लागि खेल्दा, ज्याकले आफ्नो शिक्षा जारी राखे जसका उनका आमा बुबाले सल्लाह दिए जो उनी फुटबलको साथ मात्र रहन चाहँदैनथे। फुटबल क्यारियरको साथ स्कूलको संयोजनले ग्रिलिशले धेरै बलिदानहरू गरेको देखे, यसैले उनका टीमका एक औसत एकेडेमी खेलाडी रहे।
ज्याक ग्रेलीश विला एकेडेमीमा। तपाईं उसलाई हाजिर गर्न सक्नुहुन्छ?
ज्याकले7को उमेरमा पहिलो ट्रफी जित्यो। तपाईंलाई थाँहा थियो?… उनको ट्रफी मेडल उनको दिवंगत भाइ कीलानको सम्मानमा उनको स्कूलमा दान गरिएको थियो। ट्रफी दान गर्नाले स्कूलले उसको सानो भाइको सम्मान गर्न थाल्यो किनभने उनीहरूले सिर्जना गरे “कीलन डेनियल ग्रेलीश मेमोरियल कप"जुन अब उनीहरूको घर प्रतिस्पर्धा ट्याग गर्न प्रयोग गरीन्छ।
ज्याक ग्रेलीश बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - सडकको प्रसिद्धि कथा
सोलीहुलको अवर लेडी अफ कॉम्प्रेसन रोमन क्याथोलिक प्राइमरी स्कूलबाट स्नातक गरेपछि, ज्याकले सेन्ट पिटरको रोमन क्याथोलिक माध्यमिक विद्यालयको एकेडेमी खेलाडीको रूपमा समेत माध्यमिक स्कूल शिक्षा जारी राखे। उनी आफ्ना बाबुआमासँग सहमत भए कि माध्यमिक शिक्षा उसको अन्तिम हुनेछ, यस्तो निर्णयले उसलाई आफ्नो क्यारियरमा ध्यान केन्द्रित गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ।
२०१२–२०१ season सीजन ज्याक ग्रलिशको क्यारियरको लागि निर्णायक मोड थियो किनकि उनले नेक्स्ट जेन सीरिज जित्न आफ्नो टीमलाई मद्दत गरे। उनीहरूले ट्रफी मनाएको क्षणको तल पत्ता लगाउनुहोस्।
ज्याक ग्रेलीश- आफ्नो टीमलाई २०१२-१– नेक्स्टजेन सिरीज जित्न मद्दत गर्दै। बर्मिंघम मेल लाई क्रेडिट।
टूर्नामेन्ट 24 द्वारा यूरोपभरि विभिन्न देशहरू द्वारा आयोजित गरिएको थियो 15th को अगस्त 2012 देखि अप्रिल 1 को 2013st सम्म। यस जीतले अ and्ग्रेजी र आयरल्यान्डको जन्म प्रतिभालाई वरिष्ठ क्यारियर कल-अप प्राप्त गर्‍यो र आयरल्यान्डको उसको राष्ट्रिय टोलीको प्रतिनिधित्व गर्न अर्को कल-अप प्राप्त गर्‍यो।
ज्याक ग्रेलीश बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - फेम स्टोरीमा उठाउनुहोस्
आयरल्याण्डबाट इ England्ल्यान्ड यूएक्सएनयूएमएक्स टीममा स्विच गरे पछि पनि राष्ट्रिय दृश्यमा, एक्सएनयूएमएक्समा ज्याकले आफ्नो टीमलाई प्रतिष्ठित टुलन टूर्नामेन्ट जित्न मद्दत गरे।
टोलीका साथीसँग २०१ T टुलन टूर्नामेन्ट मनाउँदै ज्याक ग्रेलीश।
ग्रेनालीस पछि टूर्नामेन्ट एक वि win्गरको रूपमा चम्किरहेको थियो र भिलाको लागि मिडफिल्डर आक्रमण गर्दै। उनी दौडनको लागि उनको क्षमताको लागि प्रशंसित छन् र कसै-कसैले यसलाई बोलाउने छन्, भूत आफ्ना विरोधीहरूलाई पार गर्दै। उनको चिनारी आन्दोलनको परिणाम स्वरूप, उनी इनाम पाए जुन उनी पहिलो टिम खेलाडी र पछि कप्तान बने। एक नेताको रूपमा, ज्याकले एक टीम-रेकर्ड 10 लिग एक प in्क्तिमा जित्ने आफ्नो टीमको नेतृत्व गरे।
ज्याक ग्रेलीश एस्टन भिल्लाको साथ फेम स्टोरीमा उठे।
फेरी, उनले आफ्नो फार्म भिला पक्षलाई प्ले-अफको स्थानमा पनि निर्देशित गरे जहाँ प्रतिद्वन्द्वीहरूसँगको जीतले उनीहरूलाई तीन बर्षको अनुपस्थिति प्रीमियर लिगमा पदोन्नति प्रदान गर्‍यो। बाकि, जस्तै तिनीहरू भन्छन्, अब इतिहास हो।
ज्याक ग्रेलीश बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - सम्बन्ध जीवन
एस्टन विला लीजेन्डको पछाडि साशा अटवुडको व्यक्तित्वमा एक आश्चर्यजनक मोडेल प्रेमिका रहेको छ।
ज्याक ग्रेलीश र उनको प्रेमिका साशा अटवुड। क्रेडिट लाई एक्सप्रेस गर्न।
ज्याक ग्रेलीश माध्यमिक विद्यालयमा छँदा उनको प्रेमिकालाई भेटे। उनीहरू दुबै किशोर-किशोरीहरू थिए जसले सोलिहुलको सेन्ट पिटर्स रोमन क्याथोलिक माध्यमिक विद्यालयमा सँगै स्कुल गरे। तिनीहरू त्यसबेलादेखि सँगै आएका छन् (लेख्ने समयमा जस्तै), उनीहरूको नाटक मुक्त सम्बन्धको प्रतीक।
साशा अटवुड बर्मिंघमको मोडेल हो। उनी १ profession वर्षको उमेरमा एजेन्टले चिच्याए पछि उनी आफ्नो पेशा शुरू गर्छिन् जब उनी आफ्नो गृहनगरमा उनको आमासँग शपिंग गर्दै थिइन्। एटवुड हाल मोट मोडेलमा हस्ताक्षर गरिएको छ, लन्डन मध्ये एक र युरोपको अग्रणी फेशन मोडेल एजेन्सीहरू।
ज्याक ग्रेलीश बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - व्यक्तिगत जीवन
के ले ज्याक ग्रलिशलाई टिक बनाउँछ?। हामी बस्नबाट रोक्नुहोस् र आराम गर्नुहोस् जब हामी तपाईंलाई पिचबाट उसको व्यक्तित्वको पूर्ण चित्र प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछौं।
सुरूवात, जब यो फुटबल ताराहरू को लागी आउँछ, शीर्षक "सुन्दर फुटबलरहरू"अक्सर फ्यानको मनपर्ने प्रवचन बीच हो। धेरै प्रशंसकहरूले ज्याक ग्रिलिशलाई एकको रूपमा देख्छन् बेखम उसको फोटोसमेटमा सारांशमा प्रस्तुत गरिएको सुन्दरतालाई धन्यवाद दिन चाहन्छौं।
ज्याक यति सुन्दर छैन?
उसको सुन्दरतालाई छोड्दै, धेरै उनका फ्यानहरूले प्रश्न सोधेका छन्; किन ग्रिलिसले बच्चाको आकारको शिन प्याड लगाउँदछ जुन उसको फुटबलको मोजामा गुम्दै गर्दा खेलिरहेको छ?
उत्तर सरल छ !!। ग्रेलीशको लेगी देखिएको अन्धविश्वासको विश्वासको परिणाम हो जुन उनको लागी काम गरीरहेको छ। यसले बललाई प्रभावी ढंगले नियन्त्रण गर्ने आफ्नो क्षमता कायम राख्न मद्दत गर्दछ। ग्रेलीशलाई आफ्नो बुटको किनारहरू पनि काट्न मन पर्छ जुन उनीहरूको छोटो मोजाको साथ जान्छ वा लामो लम्बाइ भएको छ।
ज्याक ग्रेलीश अन्धविश्वास वर्णन गरियो।
यस किसिमको विश्वासले रेफ्रीहरूले उनको जुत्ता तान्न र बालबालिकाको शिंगुर्ड लगाउने कामको विरुद्ध चेतावनी दिइरहेको छ।
ज्याक ग्रेलीश बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - पारिवारिक जीवन
ज्याक ग्रेलीशको परिवार सबै आजीवन एस्टोन विला फ्यान हुन्। उसको निकटको परिवारका सदस्य संख्या in मा छ र तिनीहरू सबै अ English्ग्रेजी जन्मिएका आयरिश विस्तारित परिवार र आफन्तहरूको साथ छन्। ज्याकको भाइ, केभन ग्रेलीश तलको परिवारको फोटोमा अनुपस्थित छन्।
ज्याक ग्रेलीश परिवार फोटो। आईजी लाई क्रेडिट
ज्याक ग्रेलीश शीर्ष फुटबलरहरू मध्ये एक हुन् जसले आफ्ना बुबाहरूलाई एजेन्टको रूपमा गर्छन्। केभिन आफ्नो छोराको फुटबल जीवनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छन्। आफ्नो करार मा राम्रो सर्त कुराकानी देखि आफ्नो अफ-फिल्ड जीवन को प्रबन्ध गर्न को लागी, उहाँ यो सबै गर्दछ। ज्याकको आमा करेन ग्रेलीश धेरै मुखर छैनन्, उनका पति जस्तो। उनी आफ्नो कम कुञ्जी आमा कर्तव्यहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्न रुचाउँछिन्। दुबै ज्याक ग्रेलीश अभिभावकहरू हाल आफ्नो छोरामा कडा मानसिकता जगाउने फाइदाहरू काटिरहेका छन्।
ज्याक ग्रेलीश भाइ: केभन ग्रेलीशलाई भेट्नुहोस् जो प्रशंसकहरूद्वारा ज्याकको कान्छो र एक मात्र बाँचेको भाइ हुन भनेर चिनिन्छन्। केवल आफ्नो बुबाआमा र बहिनी जस्तै एक डाइ-हार्ड विला फ्यान हो।
ज्याक भाईलाई भेट्नुहोस्- केभन ग्रीलीश। बेमेलमा क्रेडिट
केवानले विगतमा आफ्नो ठूला भाइलाई मिडियाले गरेका नकारात्मक टिप्पणीहरूबाट बचाउन आफ्नो भूमिकामा सुर्खाहरू बनाएका छन्। एक्सएनयूएमएक्सएग्रेटगोल्सका अनुसार, एक पटक मिडियामा उनी मिरर फुटबलका पत्रकार जेम्स नर्सेले बनाएको कथा फोहर पार्नका लागि गए जसले ग्रिलिश "मुटु"र"निराश पार्नु"एक असफल टोटेनहम चाल पछि।
ज्याक ग्रेलीश भाई केभनले ऐना झिक्दछन्। १०१ ग्रेटगोल्सलाई क्रेडिट।
ज्याक ग्रेलीशका भाई बहिनीहरू: ज्याकका दुई राम्रा केटी बहिनीहरू छन् जसले नाम बोकेका छन् होली र Kiera। दुई बहिनीहरू मध्ये जेठी, कियाराले उनको 14th जन्मदिन अक्टूबर 14 को 2015th दिनमा मनाइन्। निहितार्थको मतलब यो हो कि उनी 2019 वर्षमा वयस्कमा परिणत भइन्।
ज्याक ग्रेलीश र बहिनीहरू- होली (बाँया) र Kiera (दाँया)। आईजी लाई क्रेडिट
ज्याक ग्रेलीशका ग्रान्डपारेन्ट्सको बारेमा: ज्याकका हजुरबा हजुरआमा उनका आइरिश विरासत को कारण हो। उसको बुवा हजुरआमा आयरल्यान्ड को गणतन्त्र मा एक गाउँ, स्नीम को हुन्। ज्याक ग्रेलीशको पनि आफ्नी आमा बुवा मार्फत आयरिश जरा छ जो डब्लिनका हुन्।
ज्याक ग्रेलीशका हजुरबा हजुरआमा आयरल्याण्ड हेराल्डलाई क्रेडिट। आईजी लाई क्रेडिट
आयरिश रगत पनि उनको बुबाको छेउबाट बग्छ किनभने उहाँका बुवा हजुरबुबा पनि आयरल्यान्डबाट नै हुनुहुन्छ, दक्षिण अफर्ल्याण्डको दक्षिण काउन्टी गल्वे पश्चिममा पर्ने शहर, गोर्ट। यसको आधारमा, तपाईं सजिलैसँग उनको कुकुरपनालाई उनको आइरिश विरासतसँग जोड्न सकिन्छ।
ज्याक ग्रेलीश बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - LifeStyle
यो ज्याकको प्रकृतिमा छ पैसा बचाउनु र सँधै केहि चीज राख्नु। उनले विदेशी कार र मन्सेन्स किन्नु तर्कहीन खर्चको रूपमा र नराम्रो बानी वा खराब चीजको रूपमा हेरेका छन्। लेख्ने समयमा जस्तै, ज्याकले व्यावहारिक समाधानहरू समात्न छनौट गर्दछ जुन धेरै खर्च हुँदैन। यो ज्याक ग्रेलीशको जीवनशैलीको परिभाषा हो।
ज्याक ग्रेलीश जीवन शैली तथ्यहरु। आईजी लाई क्रेडिट
ज्याक ग्रेलीश बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - अनियमित तथ्यहरू
नाइट्रस ओक्सिड इनहेलिंग: वरिपरि अप्रिल 2015, TheSun कथित प्रकाशित तस्वीरहरू जैक ग्रिलिश नाइट्रस अक्साइड, हाँसोको ग्याँस, वा "हिप्पी दरार'मनोरन्जन उद्देश्यका लागि।
एक्टमा ज्याक ग्रेलीश। FoxesTalk लाई क्रेडिट।
TheSun स्पष्ट भयो कि घटना लगभग the महिना पहिले भएको थियो, र यो कार्य उनको क्लबको लागि ज्याकको भर्खरको प्रदर्शनको उत्पादन थिएन। यस कार्यले उनलाई आफ्नो पूर्व प्रबन्धक टिम शेरवुडले चेतावनी दिएको देखे।
उनको सहायक जेल पठाइएको थियो: मार्च एक्सएनयूएमएक्सको 10th दिनमा, ग्रेलीशलाई कुख्यात पिच आक्रमणकर्ताले आक्रमण गरे जसले बर्मिंघम शहरमा भिल्ला डर्बी खेलको दौडान उनलाई आक्रमण गर्न पिचमा आक्रमण गरे।
मोमन्ट ज्याक ग्रेलीश फ्यानले आक्रमण गरे। इभनिंगस्टेडार्डमा क्रेडिट।
पछिल्लो हाफमा, ग्रेलीशले एस्टोन भिल्लालाई 1 -0जीत दिलाउन गोल गरेर बयान दिए। एक्सएनयूएमएक्स -१ arrested वर्षीय आक्रमणकारी पक्राउ परेको थियो र अदालतमा मुद्दा हालेको थियो जहाँ उसले पिच अतिक्रमण र हमलाको अपराधको लागि दोषी मान्यो। उनलाई 27 हप्ता जेल सजाय सुनाइएको थियो।
तथ्य जाँच गर्नुहोस्: हाम्रो ज्याक ग्रेलीश बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू पढ्नका लागि धन्यबाद। मा LifeBogger, हामी सटीकता र निष्पक्षताका लागि प्रयास गर्दछौं। यदि तपाईले केहि राम्रो देख्नुहुन्न भने, कृपया तल टिप्पणी गरेर हामीलाई साझेदारी गर्नुहोस्। हामी तपाईका विचारहरुलाई सँधै मूल्य दिन्छौं र सम्मान गर्छौं।